KunobvaTrack: Dynamic Kufona Kucherekedza Yako Bhizinesi | Martech Zone
SourceTrack: Dynamic Kufona Kucherekedza Yako Bhizinesi
Chitatu, December 19, 2012 Chitatu, December 19, 2012 Douglas Karr
Isu tinoshanda nemakambani mazhinji akakura uye chinetso chakaenderera chinogara chiri nzira yekutevera kuti mafambiro ari kusvika sei kubhizinesi ravo. Nepo mabhizinesi nevatengi vachitsvaga nekuwana makambani mazhinji pamhepo, ivo vachiri kutora foni pavanoda kuita bhizinesi.
Dambudziko raive rekuti takaona kuti dzinenge shanduko dzedu dzese dzaiitika mu mwe chikamu. Vakanga vachipinda mutsara waive wakakodzera, asi waisatarisira kutevedzera. Mikana ndeyekuti izvi zvakafanana neako saiti ... kune zviuru kana makumi ezviuru ezvesanganiswa remazwi akakosha kutyaira traffic. Kune vaviri vedu vatengi, iwo mazana ezviuru emazwi akakosha!
Iko hakuna kukwana manhamba efoni ekuteedzera yega yeaya, asi akaomesesa simba rekuisa nhamba yekuisa masisitimu anogona kunyatso kuiteedzera. Iyo yakatarwa nhamba yenhamba dzenhare inogona kumisikidzwa uye kudzokororwazve kune saiti pamwe neakakosha mazwi mapoka. Izvi ndizvo zvinoitwa nehurongwa senge SourceTrak kubva kuIfbyPhone.
ne KunobvaTrak, iwe unogona kuwedzera yakasarudzika mapoka ezvinyorwa uye nesimba shandura iyo nhamba yefoni. Sisitimu yacho inonyora kufona uye inorekodha rakakodzera kiyi kiyi kiyi iyo yekufona yakapinda nayo. Iyo yakapusa sisitimu yekushandisa iyo inogona kubatsira chero bhizinesi kuti rinzwisise kunobva kwavatungamira.
Tags: kufona kwekuteverasimba rekuisa nhamba yekuisaifbyphoneseo kufona kwekuteverawemakemire